Dhadhaab oo qaxooti dib uga soo laabanayaan! | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Local News Dhadhaab oo qaxooti dib uga soo laabanayaan!
Dhadhaab oo qaxooti dib uga soo laabanayaan!
Taariikhda markii ugu horreysay muddo ku dhow 25 sanno ayey 1500 oo qoys oo Soomaali ah waxay iskood u dalbadeen in dib loogu celiyo waddankoodii hooyo, kuwaasoo imminka ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaana lagu wadaa in dib u dejin degdeg ah loo sameeyo.
Sida ay ku warramayaan madaxda hey’addaha samafalka qaarkood qoysaska doonaya inay dib u laabtaan ayaa iska diwaan geliyay xarumo ku yaal gudaha xeryaha qaxootida kala duwan ee gobolkaasi waxaana loo diyaariyay dhammaan waxyaabihii ay ku ambabbixi la haayeen qoysaskaasi.
Qoysaskaasi oo qeyb ka ah qorshaha dib u dejinta wejigiisa 1-aad ayaa codsaday in la geeyo koofurta dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolkaasi J/hoose, halkaasoo horey uga yimaadeen intii ay dagaallada sokeeye socdeen.
Dhowaan ra’iisulwasaare, Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa xaqiijiyay in qaxootiga uu ku soo arkay Dhadhaab ay yihiin kuwa si weyn u doonaya inay dib ugu noqdaan waddankoodii, sidaasi awgeed ay xukuumaddiisu mudnaanta siinayso arrimaha qaxootiga Soomaaliya.
Sannadkii la soo dhaafay ayaa guddi loo saaray ka kooban 12 xubnood — kala metelaya Soomaaliya, Kenya iyo hey’adda qaxootiga Qaramadda Midoobay ee UNHCR — kaasoo dusha u ridanaya jadwalka iyo masuuliyaadka hawlgalka dib u noqoshada qaxootiga oo ku saleysan si mutadawacnimo ah.
Previous articleKay: yaan la carqaladeyn askarta nabad ilaalinta
Next articleBaydhabo oo yeelanaysa dastuur lagu maammulo